Ny fampiharana 5 fanaovana gazety tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Ny fampiharana diary 5 tsara indrindra ho an'ny Android
Tsy maharary mihitsy ny manana diary handraketana zava-mitranga, anecdote isan'andro, teny nalaina, eritreritra ary tsy manisa intsony. Mety ho zavatra tianao soratana ao anaty iray izany, ary noho izany antony izany dia manana tanjona marobe izy ireo ary, soa ihany fa misy fangatahana gazety maromaro hita ao amin'ny Google Play Store.
Manolotra anao lahatsoratra iray izay nitanisa anay izahay ny fampiharana haino aman-jery 5 tsara indrindra ho an'ny Android. Ao amin'ny Play Store daholo ary, miaraka amin'izay, maimaim-poana izy ireo ary iray amin'ireo malaza indrindra, alaina ary ampiasaina, noho ny asany isan-karazany sy izay rehetra azony atolotra.
Amin'ity fotoana vaovao ity dia manome anao ny fanangonana ireo fampiharana gazety 5 tsara indrindra ho an'ny finday Android izahay. Ilaina ny manasongadina indray, toy ny fanaontsika hatrany, izany Maimaimpoana ireo fampiharana rehetra ho hitanao amin'ity lahatsoratra fanangonana ity. Noho izany, tsy mila mandoa vola ianao raha te hahazo ny iray na izy rehetra.
Na izany aza, ny iray na maromaro dia mety manana rafitra fandoavam-bola bitika anatiny, izay ahafahana miditra amin'ny atiny premium bebe kokoa, toy ny fiasa mandroso sy ny fiasa manokana. Toy izany koa, tsy ilaina ny mandoa vola fa ilaina ny mamerina azy.
1 Diary manokana
2 Ny Diariko - Diary, Diary misy hidim-baravarana
3 Diary tenimiafina unicorn (dian-tànana)
4 Ny Diariko - Diary Mood miaraka amin'ny Lock
5 Diary akaiky miaraka amin'ny teny miafina
Tsara foana ny manana rindranasa amin'ny diarinao manokana, ary izany no nametrahantsika voalohany an'io. Raha mikasa ny hanomboka ny fahazarana manoratra ny zava-drehetra momba ny fiainanao ianao, manomboka amin'ny fahombiazana ka hatramin'ny fianjerana ary izay rehetra mety hitranga aminao, Safidy tsara ny Diary manokana, vao mainka aza raha nanana diary ara-batana na fampiharana fototra ho an'io ianao.
Ary io, raha ny fanontaniana, miaraka amin'ny fisintomana mihoatra ny 50 tapitrisa eo an-damosiny, miresaka isika iray amin'ireo fampiharana malaza indrindra amin'ny karazany, izay ahafahanao manoratra naoty isan'andro, fandrosoana, asa, programa, fanendrena, hetsika atao ary ireo efa vita, sy maro hafa. Ho fanampin'izany, ho fiarovana azo antoka sy tsiambaratelo, azonao atao ny manakana ny fidirana amin'ny rindrambaiko amin'ny fomba voajanahary, izay tsy maintsy ampidirinao amin'ny pin ny fidirana amin'ny fidirana rehetra ato amin'ity diary ity
Ny fidirana an-tsoratra dia mamela ny fampiasana emojis (emotikon) haneho ny fihetsem-po, ny fahatsapana ary maro hafa. Ho an'ny ambiny, azonao atao ny manome anaram-bohitra rehetra anaram-boninahitrao hamantarana azy ireo any aoriana. Ny zavatra iray hafa dia ny ahafahanao manova sy manamboatra ny haben'ny lahatsoratra, ny loko, ny fomba ary ny zavatra rehetra azonao eritreretina mba ho maro loko sy manokana anao ny naotinao.
Diary manokana manana fitehirizana rahona. Amin'izany fomba izany, ny tahirin-kevitra, ny fampahalalana ary ireo naoty voarakitra teo aloha dia tsy voatahiry amin'ny telefaona, fa amin'ny mpizara fampiharana, amin'izay, amin'ity fomba ity, azonao atao ny miditra amin'ny diarinao amin'ny alàlan'ny finday Android rehetra.
Ary farany, ity rindrambaiko ity dia manohana ny fanohanan'ny mailaka ihany koa azonao atao ny mandefa ny tapakila amin'ny mailakao. Izy io koa dia manana kalandrie, bara fikarohana, menio safidy ary maro hafa. Izy io, tsy isalasalana, dia iray amin'ireo karazany feno indrindra amin'ny karazany, ka izay no antony nampidirinay azy ato amin'ity paositra ity.
Ny Diariko - Diary, Diary misy hidim-baravarana
Ity dia safidy tsara hafa hafa hitondrana isan'andro isan'andro voasoratra anaty fampiharana. Ny interface-ny dia iray amin'ireo madio indrindra, madio ary feno. Amin'io lafiny io dia manana rindranasa iray izay manana mpamoaka lahatsoratra miaraka amina safidy maro hanovana sy hamoronana fidirana mamorona koa izahay, miaraka amin'ny emotikon, sary, sticker ary koa horonan-tsary, zavatra izay tsy ananan'ny fampiharana rehetra an'ity karazana ity. ihany koa mamela anao hanova ny karazana endri-tsoratra sy ny fombany, ho an'ny fanaingoana feno kokoa ny fidirana rehetra, ny fanamarihana, ny fanendrena ary ny fandaharam-potoana.
Toy ny hafa amin'ny sokajy misy azy, miaro vaovao ity gazety ity ary manome fiarovana sy tsiambaratelo momba ny atiny, noho izany dia tsy mila miahiahy ianao amin'ny fametrahana ny findainao ary ny fananan'ny olona haka azy io hijerena izay rehetra notahirizinao. Mametraha lamina na hidin-dàlana fotsiny mba hahafahana miditra. Raha manana mpamaky sidina eo ambanin'ny efijery ny findainao, dia mifanaraka amin'ny hidin-trano My Diary ihany koa.
Ny fampifanarahana ny diarinao amin'ny Google Drive na Dropbox no filaharan'ny andro. Amin'izany dia azonao atao ny miditra amin'ny diary amin'ny alàlan'ny fitaovana Android hafa mora foana, noho izany ny findainao dia tsy voatery hitahiry ny angona sy izay rehetra voasoratra ao anaty takelaka. Noho izany, raha very ny findainao na sendra lozam-pifamoivoizana dia hijanona ho voaro amin'ny rahona ny diary miaraka amin'izay rehetra nomarihinao teo.
Mikasika ny fanaingoana ny interface interface amin'ity app ity, koa azonao atao ny manova ny loko afovoany na misafidy, raha tianao, ny maody na ny maizina, ahafahanao miaro ny masonao amin'ny hazavana kely na tsy misy jiro. Endri-javatra mahaliana iray hafa dia ity fampiharana ity dia mamela ny fanondranana ny gazety amin'ny endrika txt. ary PDF, sady manolotra ny fampiasana kalandrie sy maro hafa.
Diary tenimiafina unicorn (dian-tànana)
Si buscas fampiharana diary misy fikitika vehivavy kokoa noho ny zavatra hafa rehetra, Diary miaraka amin'ny teny miafina Unicorn no mety aminao toy ny peratra amin'ny rantsan-tànanao. Araky ny anarany dia arovana amin'ny alàlan'ny tenimiafina ary hatramin'ny dian-tànana aza io diary io (raha tsy hoe manana fantsom-panaovana rantsantanana ara-batana ny findainao). Raha manadino ny tenimiafinao ianao dia hanampy anao hahatadidy azy ny fanontaniana fiarovana amin'ity fampiharana ity; apetraka fotsiny teo aloha.
Ny endriny, ankoatry ny maha-vehivavy azy, dia tonga lafatra ihany koa ho an'ny zazavavy ao an-trano. Ny diary dia iray amin'ireo fomba mahomby indrindra hanelingelenana ny tenanao, hamporisihana ny famakiana, ny fisaintsainana ary handrisihana ny fahazarana manoratra sy manoratra amin'ireo ankizy kely.
Ity fampiharana ity dia manana izay ilainao rehetra hanoratanao ireo fahatsiarovana, anecdotes ary izay rehetra azonao eritreretina. Raha toa ianao ka manadino ireo asa rehetra anananao mandritra ny andro, dia mety tsara ihany koa ny mahatadidy ireo zavatra hatao sy ny fandaharam-potoana amin'ny fotoana voatondro, satria misy fampahatsiahivana, fampandrenesana ary maro hafa.
Azonao atao ny mandamina ny interface raha tianao ny mijery ny diary diarinao, miaraka amin'ny fijery tile sy lisitra. Izy io koa dia misy statistika mamela anao hijery ny fidiranao isan'andro, isam-bolana ary isan-taona, ary mamela anao hizara fahatsiarovana amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy toa ny Facebook sy ny fampiharana toa ny Messenger na Gmail. Ny zavatra iray hafa dia ny famelabelarana mamela ny famoronana sary, miaraka amin'ny borosy amin'ny loko isan-karazany sy bebe kokoa mba hanao anototra maro loko sy somary mamorona, ary koa amin'ny feo izay mahatonga azy ireo hahafinaritra.
Developer: Diary Netic Unicorn
Ny Diariko - Diary Mood miaraka amin'ny Lock
Diary iray hafa izay voatanisa ao amin'ny fivarotana fampiharana Google Play Store ho iray amin'ireo tsara indrindra sy miloko indrindra dia ny Diary -ko Lock Mood Diary.
Izany koa safidy tsara hafa amin'ireo rindranasa teo aloha izay notanisainay tamin'ity fanangonana ity, satria fampiharana misy fiasa maro izay misy hidin-trano, izay azo vohaina amin'ny alàlan'ny teny miafina sy ny fampiasana ny dian-tànana amin'ny alàlan'ny sensor finday Android.
Hadinoy ny famoronana naoty nentim-paharazana ao amin'ny diarinao. Amin'ity fampiharana ity dia azonao atao ny mamorona lahatsoratra an-tsoratra miaraka amina karazana lohahevitra, karazana endritsoratra ary sticker mba hahatonga ny fahatsiarovana sy ny anecdotes ho mahafinaritra sy hamorona kokoa. Azonao atao koa ny manampy sary, horonan-tsary, ary horonam-peo, mba hampiorina kokoa azy io.
Ny lohahevitra ara-bola tokony hofidina ao amin'ny katalaogin'ity gazety ity isaky ny fidirana dia misy ny lohahevitra misy ny vanim-potoana fanao isan-taona, tsy misy lokony ary maro hafa izay mifanaraka amin'ny tsiron'ny olona tsirairay, ary miaraka amin'izay koa, inona no fidirana. jereo, mba hahafahanao mamela ny fisainanao hitarika anao rehefa manonitra anekdota ao amin'ny diary. Azonao atao ihany koa ny manoratra feo am-peo ao amin'ity rindrambaiko ity, ka tsy amin'ny fotoana rehetra dia tsy maintsy manoratra izay mitranga isan'andro isan'andro ianao.
Developer: Diary & Gazety App
Diary akaiky miaraka amin'ny teny miafina
Mba hamaranana ity lahatsoratra fanangonana ny fampiharana diary 5 tsara indrindra ho an'ny Android ity dia manana diary Intime misy teny miafina izahay. Ity gazety ity, toy ireo hafa izay efa notanisainay etsy ambony, mandray ny filaminana sy ny fiainana manokana, Ka amin'ity tranga ity dia manakana amin'ny alàlan'ny tsimatra efatra izahay. Misy ihany koa ny lahasa fanavaozana, fanarenana ary famafana ny teny miafina, ary koa ny fanidiana mandeha ho azy aorian'ny tsy fahavitrihan'ny 5 minitra mahery.
Tsara ho an'ny vehivavy izany ary mitahiry tsiambaratelo, zava-mitranga, zavatra tokony hatao ary inona koa. Mora azo ny interface-ny, ary miaraka amin'izay koa, voalamina tsara, mba hahafahanao mitazona ny fidirana rehetra ao anatin'ny fotoana fohy.
Izy io koa dia a iray amin'ireo maivana indrindra, miaraka amin'ny lanja manodidina ny 7 MB. Ny zavatra iray hafa dia iray amin'ireo malaza indrindra izy io, miaraka amin'ny 5 tapitrisa mahery ny fisintomana ao amin'ny Play Store ary manana kintana 4.5 malaza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana diary 5 tsara indrindra ho an'ny Android